Cake Strawberry Fresh oo leh Strawberry Buttercream - Keega
Keega Strawberry ee leh subagga loo yaqaan 'strawberry buttercream' oo laga sameeyay miraha strawberries cusub!
Keeg Strawberry ah oo lagu sameeyay strawberries cusub oo aan lahayn Jell-O? Haa, waa macquul waana macaan tahay! Sirtu waxay ku daraysaa mid cusub dhimista strawberry si aad u garaacdo oo aad ugu qasto inta hartay adiga Qaboojinta buttercream oo loogu talagalay cunto karinta keega cusub ee dhadhanka u eg sida strawberries dhabta ah!
Haddii aad muddooyinkan dambe ku sugnayd Pinterest, waxaad heli doontaa ugu yaraan hal TRILLION oo cunto ah oo loogu talagalay keega strawberry. Waxaan isku dayay xoogaa ka mid ah baloogyo magac weyn leh oo aan u maleynayay inay hubin doonto bixinta iyo wiilku waan ka xumaaday. Cunnooyinka badankood waxay ka koobnaayeen midkood Jell-O oo loogu talagalay dhadhanka strawberry ama isticmaalka isku dhafka sanduuqa.
“Aamusnaan buu la ooyaa ilmada xanuunka”
digsi keeg wareegsan oo dalool leh dhexda
Waxaan kaliya rabay cunto karis fudud oo xoqan ah oo lagu sameeyay strawberries dhab ah! Taasi miyaanay ahayn wax badan oo la isweydiin karo?
Hadda anigu dhab ahaan ma ihi roodhiistaha ugu fiican adduunka laakiin waxaan ku raaxaystaa loolan sidaa darteed waxaan isu taagay si aan u arko haddii aan samayn karo keega runta fiican leh. Waxaan is siiyay laba sharci. Waxaan u baahday inaan isticmaalo strawberries dhab ah dhadhankuna waa inuu u dhadhamiyaa sida strawberries dhabta ah keegga kaligiis.
Miyaad samayn kartaa keeg strawberry cusub oo aan lahayn Jell-O?
Hadda ha igu qaldan. Waan jeclahay qaar ka mid ah Jell-O laakiin kuma jiro keegaga. Gelatin maahan wax aan u maleynayo in lagu daro keegga si aan u sameeyo iftiinka muuqaalka ee qalafsan, oo u eg cirridka iyo cufnaanta. Waxaan u maleynayaa in waxa ugu xun ee ku saabsan keega strawberry ee lagu sameeyo Jell-O ay tahay inay u dhadhamayso sida strawberries been abuur ah.
Aad u fiican dhadhaminta xayawaannada jilicsan laakiin aan ku badnayn keeggayga. Marka mid ka mid ah caqabadaha shakhsiyadeed ee i soo wajahay waxay ahayd in aan sameeyo keeg strawberry ah oo aan lahayn gelatin.
Imtixaannada keega cusub ee 'strawberry' oo cusub ayaa fashilmay
Marka waxaan bilaabay tijaabinta cuntooyinka keega ee strawberry aniga ii gaar ah. Weligay weligay sidan ugu adag ugama shaqeyn hal karino. BADAN isku dayyo badan oo fashilmay oo aan ku sigtay inaan ka quusto. Tani waxay u badan tahay inay tahay macluumaad ka badan intii aad waligaa u baahnayd inaad ka ogaato keega strawberry.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabihii aan isku dayey in aan ku sameeyo keega strawberry guuleysta oo leh miraha miraha cusub ee 'strawberries'.
Kaliya miyaad ku dari kartaa strawberries cusub keega vaniljka si aad u sameysid keega strawberry?
Weligaa miyaad aragtay fiidiyow dubis ah oo ay goynayaan noocyo yar yar oo miro macaan ah oo ay ku darayaan digaagga keega oo ay ku andacoodaan inay dhadhan fiican yihiin? Waan ka xumahay, laakiin taasi waa been weyn oo dufan ah.
Markii la kariyo miraha loo yaqaan 'strawberries', kaliya ma aha inay lumiyaan dhadhankooda strawberry laakiin waxay isu rogaan midab cawl leh oo murugo leh. Xaqiiqdii waxay umuuqataa jeebado miro qudhun ah oo kujira digaagga keega. Cunto la'aan
Tijaabadii ugu horreysay, waxaan jarjaray xoogaa miro macaan oo miir ah. Waxaan ku darsaday strawberries la jarjarey baytka iyo casiirka caanaha. Waxaan ka jaray xaddiga caanaha ah ee cabitaanka aan ku daray sidaa darteed dareere dheeri ah uguma darin baterigeyga. Waxaan yareeyay sonkorta 1 oz si aan ugula xisaabtamo wixii sonkor ah ee ku jira strawberries-ka Waan hubaa in tani aysan shaqeyn doonin laakiin waxaan kaliya rabay inaan hubiyo. Sidii aan ka baqay, keeggaan wuxuu ahaa mid aad u qoyan, cufan, iyo bunni. Ma ahan keegga strawberry-ga ee qurxoon ee aan qiyaasayay.
Tijaabada-qalalan Cake Strawberry Cake
Tijaabadan, waxaan go aansaday inaan isticmaalo strawberries-barafoobay. Xaqiiqdii ma sahlana in la helo sida cusub laakiin meelaha badankood ayaa qaada. Iyaguna ma jaban yihiin. Bacda 1.7oz waxay igu kacday $ 4. Waxaan isticmaalay boorsadii oo dhan.
Waxaan ku xardhay strawberiga mashiinka xawaashka, waxaan sifeeyay guntimaha waaweyn waxaanan ku daray maaddadayda qalalan. Waxaan dareemay in keegani uu ubaahan karo xoogaa qoyaan saaid ah waxaan kor uqaaday dareerayaasha waxaanan kudaray saliida cuntada yar. Waxaan sidoo kale ku daray taabashada casaan iyo casaan midabaynta cuntada si aan uga hortago bunni.
Keegani runtii wuu fiicnaa! Jajabka ayaa ahaa mid aad u fiican, dhadhanka ayaa ahaa mid aad u dhalaalaya, dhadhan strawberry tartar iyo xaqiiqdii guul buugayga! Laakiin wali waxaan ku raadinayay qashinkaas REAL strawberries.
sidee u samaysaa shukulaatada moodeelka
Waxaan go aansaday inaan sameeyo hal tijaabo oo dheeri ah.
Keeg strawberry cusub oo lagu sameeyay dhimista strawberry
Waxaan isku dayay inaan isticmaalo hoos udhaca miraha 'strawberry' ee tijaabooyinkii hore laakiin muuqaalka wali wuu xanaaqsanaa. Markan waxaan isku dayay yareynta dareerayaasha si aan u sameeyo yarayn dhab ah. Waxaan sidoo kale ku daray liin dhanaan si aan u xoojiyo dhadhanka dhadhanka strawberry.
Waxaan sidoo kale adeegsaday emulsion emberion halkii laga soosaari lahaa strawberry (looma baahna laakiin waxay ka caawisaa midabka iyo dhadhanka). Waxaan sidoo kale ku daray dhowr dhibcood oo midab casaan leh oo casaan midabaynta si aan u helo midabka casaanka ah ee aan raadinayey.
Natiijada? Keeg aad u macaan oo qoyan oo jilicsan oo dhadhamiyay SAXAAFADDA sida strawberries.
Adigu kuma ciyaarin, farxad baan ku qayliyey markii aan dubay keeggan! Burburku wuxuu ahaa mid qumman! Dhadhanku waa yaab! Waxaan aad ugu orday dhamaan qolalka guriga aniga oo ku qasbaya gabadhayda, ninkeyga iyo kaaliyaha in ay isku dayaan keegga isla markiiba. Waxaan doonayay inaan hubiyo inaanan waalneyn oo kaliya. Taasi waxay ahayd heshiiska dhabta ah!
duncan wuxuu canaantaa maaddooyinka keegga maro jilicsan
Rave dib u eegis ku wareegsan oo dhan! * is-sare-shan *
Sida loo sameeyo dhimista miraha loo yaqaan 'Strawberry'
Ku dar mirahaaga strawberries iyo sonkorta digsi dhexdhexaad ah. Haddii ay barafoobaan, marka hore iyaga dhalaal. Haddii ay cusub yihiin ka saar dusha sare oo googooyaa googooyo. Ku qas qashin-qubka haddii aad doorbideysid yarayn siman.
Isku dar isku dar ah ka dibna hoos u dhig oo u oggolow inuu isku kariyo. Mararka qaarkood walaaq si looga hortago gubashada.
Marka dhimista strawberry-ka ay qaro weyn tahay sida yaanyada, waxaad ku fiicantahay inaad tagto!
Isku qas liin dhanaan, casiir iyo milix.
U oggolow dhimista miraha 'strawberry' inay qabowdo kahor intaadan ku isticmaalin dherigaaga keega. Waxaan u isticmaalaa badh baytiga badhna dhaxanta!
Sida loo sameeyo keega lakabkaaga strawberry
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida dhaxan loo buuxin karo iyo sida loo buuxinayo keegga, ka eeg kan sida loo sameeyo casharkaaga keega ugu horeeya
Hubso in keegaaga la qaboojiyey ama xitaa qayb ahaan la qaboojiyey markii la is dulsaarayo si ay ugu fududaato in la maareeyo. Ka jar geesaha iyo dusha sare ee bunni haddii aad rabto.
Samee subaggaaga duub oo isku laabo dhimista strawberry-ka hadhay si aad u barafowdo strawberry cusub oo dhadhan fiican leh!
Lakabkaaga ugu horreeya ee keega strawberry-ga ah hoos u dhig ka dibna ku faaf daaha deeqsinimada leh ee barafka. Isku day inaad si siman u dhigatid.
Lakabkaaga xiga ee keega saar dusha sare kuna soo celi lakabyada haray.
Ku dabool keegga oo dhan lakab khafiif ah oo subagga saliidda leh ka dibna ku qabooji qaboojiyaha illaa 20 daqiiqo illaa iyo inta ay subagdu ka adag tahay. Tan waxaa loo yaqaan jaakad jajab ah.
Ku dhalaali keega lakabka ugu dambeeya ee buttercream oo qurxiya sida aad rabto! Keeggan waa in la qaboojiyaa ilaa inta laga shaqeynayo. U oggolow keegga inuu fadhiisto heerkulka qolka 2 saacadood ka hor intaadan u adeegin. Keeg qabow aad uma dhadhamo!
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysaneyso cuntadan! Fadlan ku xidhnow cuntadan haddii aad sameyso si aan u arko halabuurkaaga!
Keeggaan nooca 'strawberry fresh' ah ayaa laga sameeyay dhimista strawberry-ka ee 'FRESH'! Keeggu waa mid qoyan oo jilicsan oo leh midab casaan qurux badan. Keegga ku habboon xagaaga! Cuntadani waxay ka dhigeysaa seddex wareeg 8'x2 'keeg ah oo leh subagga strawberry iyo buuxinta strawberry. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:konton daqiiqado Wadarta Waqtiga:1 saac 10 daqiiqado Kalori:603kcal
Cunnooyinka Cake Strawberry Fresh
▢14 ounces (397 g) bur ujeedo oo dhan
▢1 1/2 qaaddo budada dubista
▢8 ounces (226 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢10 ounces (284 g) sonkorta granulated
▢1/2 qaaddo shaaha liinta laga soosaaray
▢1 1/2 qaaddo shaaha emulsion strawberry ama laga soosaaray, waxaan isticmaalaa emulsion rootida rootida LorAnn
▢zest mid liin dhanaan
▢1 Miisaska cuntada liin dhanaan cusub
▢6 ounces (170 g) ukun cad heerkulka qolka
▢4 ounces (113 g) dhimista strawberry heerkulka qolka
▢6 ounces (170 g) caano heerkulka qolka, caanaha oo dhan ayaa ugu fiican
▢1/2 qaaddo shaaha Midabka cuntada casaanka ah Waxaan isticmaalaa maaddada loo yaqaan 'Americolor pink pink'
▢32 ounces (907 g) strawberries cusub ama barafoobay dhalaalay
▢1 qaaddo shaaha liin dhanaan
▢1 Miisaska cuntada liin dhanaan
▢1 qanjaruufo cusbo
▢4 ounces (113 g) sonkorta ikhtiyaari ah
Easy Strawberry Buttercream Qaboojinta
▢16 ounces (454 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢Istaag mashiinka leh kuuskuusashada iyo kuuskuubashada (ama mashiinka gacanta)
▢Saddex, 8'x2 'digsiyo keega wareega ah
Tilmaamaha Yaraynta Strawberry
Waxaan kugula talineynaa inaad sameyso dhimistaan ​​maalinta ka horeysa ee aad diyaar u tahay inaad sameyso keegaaga.
Ku dhaji miraha strawberries cusub ama la dhalaaliyay digsi dhexdhexaad ah. Ikhtiyaari ah: ku dar miraha 'strawberries' blender emnderion haddii aad doorbideysid qaab jilicsan oo ka yaraynta strawberry.
Kuleyl kuleyl dhexdhexaad ah kuna dar sonkorta (haddii loo baahdo), liin dhanaan, liin dhanaan iyo cusbo. Marmar walaaq si aad uga hortagto gubashada.
Mar alla markii aad xumbaysid, yaree kuleylka illaa hoose-dhexe oo si tartiib ah u yaree ilaa miraha ay bilaabaan inay kala baxaan oo isku darku uu hoos u dhaco illaa kala badh Tani waxay qaadan doontaa qiyaastii 20 daqiiqo. Haddii isku-darkaagu uu hoos u dhacay kala-bar oo uu weli biyo yahay, sii wad inaad wax kariso illaa inta dareerayaasha oo dhami ka baxayaan.
Mararka qaarkood walaaq isku dar si aad uga hortagto gubashada. Waa inaad kudhameeysid qiyaastii 2 koob oo ah dhimista strawberry qaro weyn oo umuuqda suugo yaanyo ah. U wareeji weel kale oo qabow ka hor intaadan isticmaalin.
Waxaad u isticmaali doontaa qaar ka mid ah dhimista budada keega, qaar dhaxanta iyo inta soo hartay si aad ugu buuxiso inta u dhexeysa lakabyada keega qoyaan dheeraad ah. Yaraynta haraaga waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha ilaa hal usbuuc ama waa la qaboojin karaa 6 bilood.
Tilmaamaha Cake Strawberry
FIIRO GAAR AH: WAA MUHIIM IN dhammaan waxyaabaha heerkulka qolka ee kor ku xusan ay yihiin heerkulka qolka oo aan qabow ama kulul lahayn.
Hubso inaad ka qaadatid dhimista mirahaaga miraha qaboojiyaha 1 saac ka hor intaadan samayn keegaaga si ay u timaaddo heerkulka qolka.
Ku hagaaji raashinka foornada booska dhexe oo kuleyli 350ºF / 176ºC.
Saliid seddex 8 'keeg oo keeg ah oo leh goos goos ah ama sii daayo digsi doorbid
Weel dhexdhexaad ah oo gaar ah, isku walaaq caanaha, yareynta miraha loo yaqaan 'strawberry emulsion', laga soosaaray vanilj, soosaarida liinta, liin dhanaanta, casiirka liinta, iyo midabaynta cuntada casaanka ah.
Weel dhexdhexaad ah oo gooni ah, isku walaaq bur, budada dubista, soodhaha iyo milixda.
Kudar subagga heerkulka qolkaaga mashiinka isku dhafka ah ku lifaaq lifaaqa suunka oo garaac xawaare dhexdhexaad ah illaa uu ka siman yahay oo dhalaalayo, illaa 30 ilbidhiqsi.
Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sonkorta, garaac ilaa inta isku dhafan ay tahay mid jilicsan oo ku dhow cad, qiyaastii 3-5 daqiiqo.
Ku dar ukunta cadaan midba mar, garaac 15 ilbiriqsi inta udhaxeysa. Isku darkaagu waa inuu u ekaadaa mid isku xidhan markan. Haddii ay u muuqato mid la duudduubay oo la jebiyey, subaggaaga ama ukuntaada cad ayaa aad u qabow.
Isku qas xawaare yar oo ku dar qiyaas ahaan seddex meelood meel ka mid ah maaddooyinka qallalan qashinka, ku xigo isla markiiba qiyaastii seddex meelood meel ka mid ah caanaha isku darka, isku dar ilaa maaddooyinka ay ku dhow yihiin inay ku daraan dheriga. Ku celi hawsha 2 jeer oo dheeri ah. Markay baytarku u muuqdo inuu isku qasan yahay, jooji mashiinka oo ku xoq dhinacyada saxanka leh spatula caag ah. Haddii ay u egtahay jalaato, waad saxday!
U qaybi baytarka si siman inta u dhexeysa digsiyada la diyaariyey. Ku jilciso dusha sare leh spatula caag ah.
Kee ku duba 350ºF / 176ºC illaa ay ka dareemayaan adkeyn xarunta dhexdeeda oo caday ka soo baxayo isagoo nadiif ah ama xoogaa jajab ah dul saaran yihiin, qiyaastii 30-35 daqiiqo.
Digsiyada dhig dusha siligga oo qabow 10 daqiiqo. Kadib keeggaaga ku soo daadi duubbada oo si buuxda u qabooji.
Markaad qaboojiso, ku duub lakab kasta baakad caag ah oo qaboojiyaha ama qabooji ka hor intaadan isku darin keegaaga.
Ku rid ukunta cad oo la kariyey iyo sonkorta budada ah weelka weelkaaga isku darka Ku dar lifaaqa kuleylka iskudir walxaha hoose, ka dibna kor ugu karbaash 5 daqiiqo.
Kudar subaggaaga jilicsan ee guntimaha ku karbaash dusha sare ilaa 8-10 daqiiqo ilaa ay aad u cadaato, fudeyd iyo dhalaal. Waxay u muuqan kartaa mid curyaansan oo jaalle ah marka hore, tani waa caadi. Karbaash sii wad.
Ku dar hoos u dhigista strawberry, soosaarida vanilj iyo milix isla markaana sii wad karbaashka ilaa aad kareyso.
Dhig lakabkaaga ugu horreeya ee keega strawberry saxanka doolshaha ama sabuuradda keega. Ka jar qubbada haddii loo baahdo mindi af badan si keega dushiisa uu u siman yahay.
Ku dar lakab aad u khafiif ah ama hoos u dhacaaga qaboojiyey dusha sare ee la gooyey. Tani waxay kaa caawineysaa inaad kudhasho keegga waxayna ku dareysaa qoyaan iyo dhadhanka strawberry.
Kudar lakab ah buttercream strawberry, waxaan tooganayaa qiyaastii 1/4 '. Ku jilci shabaqaaga miisaanka leh illaa uu ka siman yahay.
Waxaad ku dhalaalisaa banaanka keegaada inta hartay ee saliida leh kuna qurxiya xoogaa cusub. strawberries haddii la doono.
Hubso in dhammaan walxahaaga (ukun cad, caano, subag, yarayn) yihiin heerkulka qolka ama in yar oo diiran si aysan dubkaaga u carqaladeyn.
Si aad ugu guuleysato, isticmaal miisaanka cuntada si aad u miisaanto maaddooyinkaaga. Ku beddelida qoddobkan koobabka waxay u horseedi kartaa guuldarro. Akhriso qoraalkeyga ku saabsan sida loo isticmaalo cabirka macluumaad dheeri ah.
Waan isticmaalaa Ameerikaanka casaanka korontada midabaynta cuntada si aan u helo midabkayga casaanka ah ee quruxda badan. Waxay u muuqan kartaa khiyaamo, laakiin haddii aadan ku darin, midabka ka soo baxa miraha geedaha 'strawberries' ayaa dubmi doona, keeggaaguna wuxuu noqon doonaa cawl.
Waxaan isticmaalayaa Bosch Universal Plus qas a for this, laakiin waxaad u isticmaali kartaa wax kasta oo fiicni KitchenAid ama fiicni gacanta.
Waa inaad u isticmaashaa ukunta WHITES for this recipe, huruudda ukunta waxay u rogi kartaa gudaha rootigaaga keega.
Waxaan jeclahay inaan isticmaalo saliida LorAnn emulsion rootiga rootiga, laakiin sidoo kale waad isticmaali kartaa soosaarid.
Markaad sameyneyso yareyntaada, ujeedku waa in la soo saaro dareeraha ugu badan ee suurtogalka ah adigoon gubin miraha loo yaqaan 'strawberries'. Isku darka waa inuu u ekaadaa suugo yaanyo qaro weyn oo kala badh ayuu yaraan doonaa.
Qoraalada Strawberry Buttercream:
Hubso in barafkaagu aad u fudud yahay oo caddaan yahay ka hor intaadan ku darin wax shiidan. Sii dhadhan, haddii ay weli u dhadhamayso sida subagga, sii wad karbaashidda ilaa ay u dhadhamayso sida jalaatada macaan.
Haddii subagaaga subag u muuqdo mid la duubay, waa qabow badan. Soo qaad 1/2 koob oo ah buttercream kuna dhalaali microwave-ka illaa ay si dhib yar u dhalaasho. Qiyaastii 10-15 ilbiriqsi. Dib ugu shub subaggaaga subaga, iskuna qas ilaa kareemka.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:603kcal(30%)|Kaarboohaydraytyada:63g(kow iyo labaatan%)|Protein:3g(6%)|Dufan:39g(60%)|Dufan Dufan:24g(120%)|Kalastarol:102mg(3. 4%)|Sodium:222mg(9%)|Kaliumperyamper:89mg(3%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:kontong(56%)|Vitamin A:1190IU(24%)|Vitamin C:2.9mg(4%)|Kaalshiyam:37mg(4%)|Bir:0.8mg(4%)
sida loo duubo shukulaatada daboolay strawberries
intee ayuu sameeyaa kabka dhintay ee socda
xarunta zoolander derek ee carruurta aan si fiican wax u akhrin karin
maxay yey da 'yarta ugu tahay netflix